"Impi izangoma" - TV imiphumela emangalisayo, abantu emangalisa ngozwelo eliphezulu. Nabahlola imihlola ulwazi yayo ongaqondakali sakara ababuki TNT siteshi. "Impi izangoma," 16 isizini yabonisa kumnandi imihlola parapsychological.
contact Bioinformatic Nicole Kuznetsova
UNikolai Kuznetsov, ngokuvumelana izibukeli, has a clairvoyance egqamile futhi proscopy. Okunjalo supernormal izibukeli eziningi ezihlobene Ukuwohloka ezempilo ukulahlekelwa izwi. Abantu abaningi abanalesi sifo impikiswano okukhulu futhi bakholelwa ukuthi imfihlo kufihliwe kwezinye ezingabonwayo chip amalaka. Yena ehlangene isikhala kazibuthe, lapho izicelo ithunyelwa "Battle of izangoma," 16 isizini. Uphenyo yonke ubuyele emuva UNikolai Kuznetsov.
Yiqiniso, ngikholwa ukuthi kuyinkinga kakhulu, kodwa abanye ababukeli ubamba lo mbono. Yini engase ishiwo mayelana nohlelo "Battle izangoma"? 16 Izibuyekezo Isizini ababukeli echazwe njengo kumnandi. Ukuphila komuntu yenzeka uhlelo olulodwa Imininingwane lapho amaseli uxhumana futhi abelane idatha ahlukahlukene.
INkosikazi eHayidese - Victoria Raydos
Uhlelo ekhumbulekayo "Battle izangoma"? 16 isizini 2 uchungechunge Izibuyekezo kuxhopha futhi zihlukahlukene. ingxoxo Stormy ngakwesokudla waya Victoria Raydos, kanye wonke umbono we nezinye emhlabeni. Ngokusho ofakazi, amandla uyathakatha iza mbeni imiphefumulo abantu abafile. Ubuta ukuphakamisa impendulo yalo mbuzo. ababukeli abaningi ezikhathini eliqhakazile lesi sigameko senzeke khasa Shifty, ekuhlaseleni Ukuphelelwa, izandla abandayo nezinyawo.
Yiqiniso, clairvoyant wenza ukusaphazela e izingqondo zabaningi ngosizo imicikilisho ethile black. Kunzima ukukhohlwa inkhulumomphendvulwano kamama nge umphefumulo oshonile ingxoxo indodana imimoya, ephendula imibuzo mayelana isizathu sokufa yabo ngemilingo ... Okuthusayo emabhulohweni nasezihlotsheni ukuqopha eyayizizwa khona abafile. zokuxhumana imishini kanye nezinye emhlabeni Victoria obulala esisobala.
isiko Engaqondakali umthakathi Namtar Enzigal
Namtar Enzigal ngentshiseko iqhaza kuhlelo lwe-"Impi izangoma." 16 isizini, okuyinto Izibuyekezo azizivimbanga kuze kube manje, ukhuluma demonology - umthakathi amahle kakhulu futhi enamandla. Wanqoba ezibukelini hhayi kuphela amandla ayo imilingo, kodwa futhi Yekhanda womuntu, okuyinto Dialogue njalo ongabonakali. Ngemva kokuyeka kwelinye izwe umuntu unethuba ukuya khona zabo zaqhubeka emikhakheni lehlukene universe. Izinkolo eziningi ziye zasungula yokungcwaba okuhambisanayo isiko zemizimba. Izibilini zazo main - ugebhezi, okuyinto ine elikhulu inombolo psi amandla, mass futhi bio-ensimini, ngakho-ke, kuyinto enamandla amandla isikhungo.
Lokho entry ngokusebenzisa ugebhezi ku amandla nendawo emkhathini esungulwe ngokucacile uqobo Namtar Enzigal. He is indlela yabo uxhumano lwezigaba ezimbili: Ngokuphila Nokufa. Uhlelo "Impi izangoma" (isizini 16), ukubuyekezwa lapho ngenxa yamakhono, Namtar baphoqeleka ukuba ucabanga ngencazelo yokuphila komuntu iyisikhathi esingakanani kuleli zwe. Ikhono okulawula amandla Nirvana izimbangela ukwesaba phakathi izibukeli eziningi.
Amandla ezingaba amandla black uyathakatha UMarilyn Cerro
Clairvoyant UMarilyn Cerro futhi bahlanganyela lwethelevishini "Battle of izangoma" (isizini 16). "Impi ezinamandla" nje wathola Izibuyekezo rave. ababukeli abaningi bakholelwa ukuthi Marilyn - the Olwa acacile kakhulu futhi enamandla ngenxa yalokhu kunqoba kubo bonke abahlanganyeli. Obulala ukubukeka kwayo imilingo, lengqondo ezolile futhi eqinile. kulingisa wayo ezithathekayo has imilingo umphumela ukuguqulwa kusukela ingelosi kuya Witch. Ababukeli Abaningi baye basebenzisa nendlela yakhe yokugqoka, ukukhuluma ...
Neqiniso zamandla UMarilyn indlela ubabonisa umthelela walo hhayi kuphela abantu kodwa futhi izilwane nezitshalo. Mhlawumbe incike izinkanyezi izici uyathakatha kakhulu. Lichaza amandla ka biofield zabo.
UMarilyn ngenjabulo futhi waba nengxenye "Battle of the izangoma." 16 isizini ofakazi bokuzibonela Izibuyekezo ngokuthi kwemvelo. Abantu baba kakhulu kusukela okuzingela iminwe olukhuni namehlo isigamu-Wavala amehlo uyathakatha. Izwi lakhe elithambile nge Baltic nokugqamisa ngokoqobo enchanted izilaleli ngesikhathi izikrini TV. Abaningi bangathanda ukulala, elinye - ukudansa, eyesithathu - uphelelwa emgwaqweni. UMarilyn yena uzibiza uyathakatha abamnyama, okubonisa nesifiso salo sokuthuthukiswa isikhala okudidiyelwe emzimbeni.
amaqiniso Imfihlo mayelana isakhiwo ekhethekile wabahlanganyeli bio-field impi
Lokubaluleke kakhulu ikhwalithi yokuphila ongabantu wawuhlala khona kungekho. Ososayensi baye babonisa ukuthi ngamunye wethu uhlala ngokusebenzisa ukuphindukuzalwa 300-400 incarnations. Ngemva kokufa iningi labantu balahlekelwa inkumbulo yabo yesikhathi esedlule, ukuzalwa ngokusha, bazi ngokwabo endaweni incarnation entsha. Kodwa abanye bayakwazi ukubuyela ekuphileni kwabo kwangaphambili, ukuchitha ulwazi nokuhlangenwe nakho.
Uhlelo ekhumbulekayo "Battle of izangoma" (16 isizini)? 1 uchungechunge Izibuyekezo Uthole nokuhebeza. Izibukeli njalo ukuxoxa ikhono clairvoyant lapho uthuthela kulesi zamatshe imihlaba ephakeme. Nokho Kukhona yemibono eminingi ecatshangelwayo mayelana biofield futhi bioizlucheny, ukufakazela ukuthi kukhona okushaya amanzi nzima kakhulu.
Abaningi amehlo nokubuka ukuthi izenzakalo zenzeka uhlelo "The Battle of izangoma." 16 Izibuyekezo Isizini ababukeli ngokuthi ekhethekile futhi ngoba kwasho khona izinto eziphilayo e isakhiwo esithile - biofield. Izinjongo ezihlongozwayo libonisa ngokucacile ngemisebe yalo esisiza izangoma befuna iqiniso. Abaningi izimpendulo zivumelana ngokoqobo, saba ikhambi esifanele yingenxa emisebeni biofield.
yonke Izimfihlo Imininingwane ensimini
Abantu kusukela zaqala ukuba kuhlanganiswe microcosm. Le ndoda - nezinhlayiya ezincane ngakho. Inkambu Imininingwane wendawo yonke kuyinto esithakazelweni esingavamile esasiboniswa abantu ngozwelo eliphezulu. Bona kanye amakhono abo ngensimbi izindlela eziningi: amazwi yangaphakathi, izikrini, okuyinto esivezwa ulwazi ebonakalayo futhi psychography nge okuqoshiwe ngesikhathi osithandayo, imidwebo.
Konke lokhu izakhiwo akuzona nje imithombo yolwazi izangoma. Sinenkosi imvelaphi yabo kusukela ulwazi emkhakheni yonke futhi lungatholakala yinoma ubani.
amandla ezisebenza Sergey Pakhomov
In the hlelo TV "Impi izangoma," iningi izilaleli ngadideka futhi bedumazekile ngokuthi ukunakekelwa kaYise Pachomius. Yena ngokuzithandela kwesokunxele ukuwudlulisa wafisa ngakho konke okuhle nangakho injabulo. Uphenyo Pachomius ( "The Battle of izangoma," 16 isizini) uhlamvu ezahlukene kakhulu futhi buyaphikisana. Ezinye babaza him njengoba umlumbi ezinhle, umlumbi, umthakathi futhi a ngemilingo enamandla. Abanye ukumemezela ungumqambimanga ukukhwabanisa, embiza ngokuthi umculi we aerobatics.
Yiqiniso, kunzima ukuba wahlulele ukunemba anoma yiliphi iqembu kule ndaba. Into eyodwa uhlala evumelekile: Santa imbilapho - elikhanyayo, ilungu ezivelele "Battle of izangoma," nge engasenathonya enamandla, ukuziphatha okungajwayelekile futhi ukubukeka ezingavamile. ukumamatheka kwakhe nabanomusa nesambulo okubangelwa ababukeli abaningi, futhi kumiswa umoya inhlanhla wasiza hlanganani izangoma. Ngokungangabazeki, lokhu inhlangano elikhanyayo has angaphezu kwavamile kazibuthe edonsa kuyona konke okuhle.
amafomu Elemental futhi umcabango kubahlanganyeli "Impi izangoma"
Kusobala ukuthi sonke baba initiators inhlanhla yakhe, njengoba umcabango kunodaba. Nathi singathola ukuthi ukwenza izinguquko oyifunayo ezimpilweni zethu. Ngacabanga, elisekelwa isinyathelo, ngakho amathuba amaningi ukuba zihunyushelwe olimini ngokoqobo. Ngemva kokudala eshukumisa amafomu izangoma kubonisa imisipha ukungezwani kanye ukunqwabelana amandla wonke umzimba. Base evele lathambisa ngu ngidlula pulse amandla ukuze imicabango yakho, abenze ashukumisayo nezezinto ezibonakalayo. Ngemva kwalokho izangoma sithole impendulo yombuzo eceliwe.
Cishe zonke abathintekayo ukusebenzisa izakhi komlilo, umoya, umoya, izwe. Bacindezelekile yangaphakathi, nokunyakaza amandla abo, laba abantu abangekho hypersensitive ukunyakaza yokucabanga futhi ngeke bakwazi ukufeza le yi abalulekile. Nice ukwazi ukuthi uhlelo "Battle of izangoma" ku TNT nentshisekelo ikhono superhumans. Amashumi eminyaka, udaba wayekade ngaphansi kwesihenqo imfihlo. Manje imiqondo ezifana ayizikhondlakhondla, umlingo, wacabanga ifomu, izwe astral, akekho ofisa imbangela amahloni. ukudluliswa umphumela kuye kwaletha ushintsho lwangempela emphilweni wonke umuntu. ababukeli abaningi ngabomvu Ngokuqhubeka umbukiso emangalisayo "Battle of izangoma."